Prince Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့ ရင်သွေးရဲ့ ထီးနန်းလျာထားမှုက ဘယ်လိုလဲ
Prince Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့ ရင်သွေးက ဘယ်အချိန်မှာ နန်းတက်ရမလဲ
15 Oct 2018 . 5:55 PM
၂ဝ၁၈ခုနှစ် မေလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်လိုက်တဲ့ Prince Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ဟာ ရင်သွေးငယ်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလို့ အောက်တိုဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှာ တော်ဝင်နန်းတော် Kensington Palace က တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ၂ဝ၁၉ခုနှစ်ရဲ့ နွေဦးရာသီ (မတ်လ၊ ဧပြီလ၊ မေလ) မှာ မွေးဖွားမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ဝန်ဟာ အနည်းဆုံး ၁၂ ပတ် (၃လ) ရှိပြီလို့ သုံးသပ်ရပါတယ်။ တကယ်လို့ သားတော် ဒါမှမဟုတ် သမီးတော်တစ်ပါး မွေးဖွားခဲ့မယ်ဆိုရင် သူတို့က ထီးနန်းဆက်ခံရမှာလား၊ နန်းလျာနံပါတ်က ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ ကဲ . . ဒါဆို ဘုရင်မကြီး Elizabeth II ကနေ စပြောရအောင်။
Elizabeth II ဟာ ဗြိတိသျှအင်ပါယာရဲ့ ဘုရင်မကြီးဖြစ်ရုံမက ဓနသဟာရနိုင်ငံတွေရဲ့ အဓိပတိဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ King George V ၊ King Edward VIII နဲ့ King George VI (Elizabeth II ရဲ့ဖခင်) တို့ကနေ ထီးနန်းအမွေကို ဆက်ခံခဲ့တာပါ။ တော်ဝင်ထီးနန်းကို အစပြုခဲ့တဲ့ King George V ဟာ ၁၉၁ဝခုနှစ် မေလ (၆) ရက်နေ့မှာ နန်းတက်တယ်၊ ၁၉၃၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၂ဝ) ခုနှစ်မှာ ကွယ်လွန်တယ်။ သူ ကွယ်လွန်တော့ သားတော် King Edward VIII က နန်းတက်တယ်၊ ပြီးတော့ King George VI အဆင့်ဆင့်ပေါ့။
၁၉၃၆ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့မှာ နန်းတက်တဲ့ King George VI မှာ Elizabeth II နဲ့ Margaret ဆိုပြီး သမီးတော်နှစ်ပါးရှိပါတယ်။ နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းလေတော့ သမီးကြီး Elizabeth II ကိုပဲ ၁၉၅၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၆) ရက်နေ့မှာ ထီးနန်းလွှဲပေးခဲ့ပါတယ်။
တော်ဝင်ထီးနန်းကို အကြီးဆုံးသားသမီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေသာ ဆက်ခံတဲ့ဓလေ့ရှိပါတယ်။ အရင်တုန်းက အမတော်နဲ့ မောင်တော်ဆိုရင် မောင်တော်ကိုပဲ ထီးနန်းဆက်ခံစေတဲ့ အလေ့အထရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာ မွေးဖွားတဲ့ မင်းသားတွေဟာ သူ့ထက်အကြီးမင်းသမီးတွေကို ကျော်ပြီး ထီးနန်းဆက်ခံခွင့်ရှိပါတယ်။ (ဖိုဝါဒကြီးစိုးတဲ့သဘောပါပဲ။) ဆိုလိုတဲ့သဘောက Elizabeth II ဟာ King George VI ရဲ့အကြီးဆုံးသမီးဖြစ်နေပါစေဦး အမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက် အငယ်မင်းသားရှိနေမယ်ဆိုရင် သူမမှာ ဘုရင်မဖြစ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
(မိသားစုမှာ မင်းသမီးနှစ်ပါးသာရှိတဲ့အတွက် အကြီးမင်းသမီးက ဘုရင်မဖြစ်သွားတာပါ။) Elizabeth II ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ နန်းသက် (၆၇) နှစ်ရှိလာပြီး ကမ္ဘာ့နန်းသက်အရှည်ဆုံးဘုရင်မကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သက်တော် (၉၃) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့် သူမ နတ်ရွာစံသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် နန်းစွန့်သွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သူမရဲ့ထီးနန်းကို ဘယ်သူကဆက်ခံမလဲဆိုတာ အသေးစိတ်ကြည့်ရအောင်။
မင်းသားကြီး Philip Mountbatten နဲ့ ၁၉၄၇ခုနှစ်မှာ လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်မကြီး Elizabeth II ဟာ သားသမီး (၄) ဦး ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေကတော့ Prince Charles (၁၉၄၈ခုနှစ်မှာ မွေး) ၊ Princess Anne (၁၉၅ဝခုနှစ်မှာ မွေး) ၊ Prince Andrew (၁၉၆ဝခုနှစ်မှာ မွေး) နဲ့ Prince Edward (၁၉၆၄ခုနှစ်မှာ မွေး) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အကြီးဆုံးသား၊ သမီးတွေကသာ ထီးနန်းဆက်ခံရတာမို့ ဘုရင်မကြီးရဲ့ခေတ်လွန်မှာ ဘုရင်ဖြစ်လာမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်က Prince Charles ပါပဲ။
(၁) Prince Charles (Prince of Whales)
Prince Charles ဟာ ၁၉၈၁ခုနှစ်မှာ Lady Diana နဲ့ လက်ထပ်တယ်၊ ၁၉၉၆ခုနှစ်မှာ ကွာရှင်းခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ၂ဝဝ၅ခုနှစ်မှာ Camilla နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြန်တယ်။ Camilla နဲ့ လက်ထပ်ရာမှာ သားသမီးမထွန်းကားပေမယ့် ပထမအိမ်ထောင်မှာ Prince William (၁၉၈၂ခုနှစ်မှာ မွေး) နဲ့ Prince Harry (၁၉၈၄ခုနှစ်မှာ မွေး) ဆိုပြီး သားတော်နှစ်ပါးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
တော်ဝင်ထီးနန်းကို အကြီးဆုံး သားသမီးတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေသာ ဆက်ခံတဲ့ဓလေ့ရှိတယ်လို့ အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း တကယ်လို့ Prince Charles နတ်ရွာစံသွားရင် နောက်ဘုရင်က Prince William ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Prince Charles ဟာ (၆၉) နှစ်ရှိပြီဖြစ်တာကြောင့် တကယ်လို့ ဘုရင်ဖြစ်လာရင်တောင် ခန္ဓာဗေဒသဘောအရ နန်းသက်ကြာမြင့်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(၂) Prince William
နီးစပ်သူတချို့က ဘုရင်မကြီး Elizabeth II နတ်ရွာစံပြီးတဲ့နောက်မှာ အိုမင်းလာတဲ့ Prince Charles နန်းမတက်တော့ဘဲ Prince William ပဲ တိုက်ရိုက်နန်းတက်လာမယ်လို့ ဆိုကြပါသေးတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ။ ဘုရင်မကြီးပြီးရင် Prince Charles ။ သူပြီးရင် Prince William ပေါ့။ William ပြီးရင် ဘယ်သူနန်းတက်မယ်ထင်လဲ။ Prince Harry လား၊ မဟုတ်ပါဘူး။ Prince William နဲ့ Kate Middleton တို့က ထွန်းကားလာတဲ့ Prince George (၂ဝ၁၃ခုနှစ်မှာ မွေး) ၊ Princess Charlotte (၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှာ မွေး) နဲ့ Prince Louis (၂ဝ၁၈ခုနှစ်မှာ မွေး) တို့ကပဲ ထီးနန်းအမွေကို ဆက်ခံရမှာပါ။
(၃) Prince George
တော်ဝင်ထီးနန်းဟာ သားကြီးသမီးကြီးတွေကိုပဲ စံစားကြရတာဆိုတော့ Prince William နတ်ရွာစံသွားရင်တောင် နန်းတက်မယ့်သူက Prince George ပါပဲ။ လက်ရှိအချိန်မှာ (၅) နှစ်သာရှိသေးပေမယ့် ဖခင်နတ်ရွာစံပြီးနောက်ပိုင်းမှာ နန်းတက်လာမယ့် မင်းလောင်းလေးပါပဲ။
(၄) Princess Charlotte
Prince William နဲ့ Kate Middleton တို့ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ရတနာ Princess Charlotte ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ (၃) နှစ်သာ ရှိပါသေးတယ်။ ကလေးသဘာဝ ဘာမှမသိသေးဘူးဆိုပေမယ့် အချိန်တန်ရင် ဘုရင်မဖြစ်လာမယ့်သူပါ။ တကယ်လို့ အကိုတော် Prince George ရဲ့နောက်မှာ ထီးနန်းဆက်ခံရမယ်ဆိုပေမယ့် Prince George ဟာ အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာလို့ သားသမီးမွေးလာရင် သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကပဲ ထီးနန်းအရာ ဆက်ခံရမှာပါ။ တော်ဝင်ထီးနန်းဟာ သားကြီးသမီးကြီးတွေသာ စံစားရမယ့် ထုံးစံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်မှာတော့ Princess Charlotte ဟာ နံပါတ် (၄) နေရာမှာရှိပါတယ်။
(၅) Prince Louis
အကိုတော် Prince George နဲ့ အမတော် Princess Charlotte တို့နောက်မှာ နန်းတက်ဖို့ လျာထားတဲ့သူကတော့ Prince Louis ပါပဲ။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၃) ရက်နေ့မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့အတွက် (၆) လတောင် မပြည့်သေးပါဘူး။ အရင်တုန်းကတော့ အငယ်မင်းသားတွေဟာ အမကြီးမင်းသမီးတွေကို ကျော်လွန်ပြီး ထီးနန်းအမွေကို ဆက်ခံရမယ်လို့ ဖော်ပြခဲ့ပေမယ့် ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မှာ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ 2011 Perth Agreement အရ အမတော် Princess Charlotte ကို ကျော်လွန်လို့ မရတော့ပါဘူး။ (ဒါပေမယ့် ၂ဝ၁၁ခုနှစ်အရင်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေအတွက်တော့ ဒီဥပဒေဟာ သက်ရောက်မှုရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး) ။ ကဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နီတာရဲလေး Prince Louis ကတော့ နံပါတ် (၅) နေရာမှာရှိပါတယ်။
(၆) Prince Harry
Prince Harry ဟာ လူသိများတဲ့ မင်းသားတစ်ပါးလို့သာဆိုပေမယ့် သူ့ရှေ့မှာ နောင်တော်ကြီး Prince William နဲ့ သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေ နန်းတက်မှာဆိုတော့ သူ့ရဲ့ နန်းတက်လျာထားမှုက နံပါတ် (၆) ပါပဲ။ နောင်တော်နဲ့ (၂) နှစ်သာ ကွာခြားပေမယ့် သူ့ထက်အရင် တူတော်မောင် Prince George ၊ တူမတော် Princess Charlotte နဲ့ တူတော်မောင် Prince Louis တို့က ထီးနန်းဆက်ခံရမှာဆိုတော့ ဘုရင်ဖြစ်ဖို့က ဝေးသလိုလိုတော့ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချက်တွေကြောင့်ပဲ မြန်မာရာဇဝင်မှာ အကိုတော်နောင်တော်တွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး ထီးနန်းလုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဲ . . . ထားလိုက်ပါတော့ Prince Harry ပြီးရင် Prince Charles ရဲ့မျိုးဆက်ကုန်ပြီဆိုတော့ ဘယ်သူက နန်းလျာဖြစ်မှာလဲ။
(၇) ရင်သွေး (Prince Harry နဲ့ Meghan Markle တို့ရဲ့ ရင်သွေး)
တော်ဝင်မိသားစုဟာ Meghan Markle အနေနဲ့ ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားလိုက်ပြီလို့ ကြေညာလိုက်တော့ ရင်သွေးငယ်ဟာ ထီးနန်းလျာထားမှုက နံပါတ် (၇) ပါ။ ကိုယ်ဝန်မကြေညာခင်တုန်းက ဘုရင်မကြီးရဲ့ ဒုတိယသားတော် Prince Andrew ဟာ ထီးနန်းလျာထားမှုမှာ နံပါတ် (၇) ချိတ်နေပေမယ့် တူတော်မောင် Prince Harry မှာ ရင်သွေးငယ်မွေးဖွားတော့မှာဆိုတော့ နံပါတ် (၈) ကို ဆင်းပေးလိုက်ရတဲ့သဘောပါပဲ။ တော်ဝင်ထီးနန်းမှာက အကြီးဆုံးသား၊ သမီးတွေကသာ ဆက်ခံရတာမို့ နောင်တော်ကြီး Prince Charles ရဲ့ မျိုးဆက်တွေကို နေရာဖယ်ပေးလိုက်ရတဲ့သဘောပါပဲ။ အရင်မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေပြီးမှ အခုမွေးလာမယ့် ရင်သွေးလေးက ဆက်ခံရမှာပါ။
(၈) Prince Andrew
Prince Harry ရဲ့ ရင်သွေးငယ်ပြီးရင်တော့ Prince Charles ရဲ့ ညီတော် Prince Andrew ပဲ နန်းတက်မှာပါ။ ဘုရင်မကြီး Elizabeth II ရဲ့သားတော်ဆိုပေမယ့် Prince Charles ရဲ့မျိုးဆက်တွေက ရှေ့ကရှိနေတာကြောင့် သူ့ရဲ့ နန်းလျာဆက်ခံမှုက နောက်ကျသွားတာပါ။ Prince Andrew ရဲ့အထက်မှာ Princess Anne (၁၉၅ဝခုနှစ်မှာ မွေး) ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် သူမဟာ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်အရင်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ မင်းသမီးတွေဖြစ်တာကြောင့် Prince Andrew ကပဲ နန်းတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Prince Andrew ရဲ့ နံပါတ်က (၈) ပါ။
(၉) Princess Beatrice
Prince Andrew နတ်ရွာစံသွားမယ်ဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ သမီးကြီး Princess Beatrice ကပဲ ဘုရင်မဖြစ်လာမှာပါ။ သူမဟာ ၂ဝ၁၁ခုနှစ်မတိုင်ခင် မွေးဖွားလာတဲ့ မင်းသမီးဖြစ်တဲ့အတွက် အငယ်မင်းသားရှိရင် နေရာဖယ်ပေးရမှာဖြစ်ပေမယ့် သူမမှာ ညီမငယ် Princess Eugenie သာရှိတဲ့အတွက် နံပါတ် (၉) နေရာမှာ ရပ်တည်တာပါ။
(၁ဝ) Princess Eugenie
ဗြိတိန်တော်ဝင်မင်းဆက်ရဲ့ နန်းလျာစာရင်းမှာ Princess Eugenie က နံပါတ် (၁ဝ) နေရာမှာပါ။ သူမဟာ Prince Charles ရဲ့ တူမတော်ဖြစ်ပြီး Prince Andrew ရဲ့သမီးထွေးဖြစ်ပါတယ်။
(၂၈) နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ (၁၂) ရက်နေ့တုန်းက Jack Brooksbank နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူမဟာ သားသမီးမွေးလားမယ်ဆိုရင်တော့ သူမရဲ့ရင်သွေးက နံပါတ် (၁၁) မှာ ရပ်တည်မှာပါ။ လက်ရှိအချိန်မှာတော့ သူမဟာ Hauser & Wirth Art Gallery မှာ Associate Director အနေနဲ့ တာဝန်ယူနေပါတယ်။
(၁၁) Prince Edward
Prince Edward ဟာ ဘုရင်မကြီး Elizabeth II ရဲ့သားထွေးဖြစ်ပေမယ့် သားကြီး၊ သမီးကြီးတွေကိုပဲ ထီးနန်းဆက်ခံခွင့်ပေးတဲ့ တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထုံးစံအတိုင်း နောက်ကျသွားတာဖြစ်ပါတယ်။
Lady Louise Windsor (၂ဝဝ၃ခုနှစ်မှာ မွေး) နဲ့ James Viscount Severn (၂ဝဝ၇ခုနှစ်မှာ မွေး) တဲ့ သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါသေးတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က ထီးနန်းလျာထားစာရင်းမှာ နံပါတ် (၁၂) နဲ့ (၁၃) မှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှသာ Princess Anne က နံပါတ် (၁၄) မှာ ရပ်တည်နေပြီး သူမရဲ့မျိုးဆက်တွေအလိုက် အစဉ်အဆက်ရေတွက်သွားမယ်ဆိုရင် နံပါတ် (၂ဝ) အထိ ရောက်ရှိသွားမှာပါ။ Elizabeth II ရဲ့မျိုးဆက်တွေ ကုန်ပြီဆိုမှ သူမရဲ့ ညီမငယ် Princess Margaret ရဲ့မျိုးဆက်တွေဟာ အစဉ်လိုက်ထီးနန်းဆက်ခံရမှာပါ။ လက်ရှိထီးနန်းလျာထားစာရင်းမှာ မင်းမျိုးမင်းနွယ် (၅၈) ယောက်တောင် ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်တော်ဝင်ထီးနန်းလျာထားချက်တွေကို ဗဟုသုတရရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။ အချက်အလက်တစ်စုံတစ်ရာ လွဲမှားခဲ့ရင် စာရေးသူရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ သိရအောင်လည်း ဝေငှပေးပါဦး။
Reference and Photo Credit – People